China 1000ml lead-isina soda bhodhoro fekitori uye vagadziri | Honghui Girazi
DURABLE CONSTRUCTION: Flip-yepamusoro mabhodhoro anogadzirwa kubva kune gobvu uye yakasimba girazi rekumisidzana kwakasimba kune kukanganisa uye kupisa tembiricha. inogadzirwa kubva kune yepamusoro mhando polypropylene uye waya chivharo chinoitwa kubva simbi isina simbi yekunakisa ngura kuramba.
LEAKPROOF & AIR TIGHT CAP: Iyo kapu inogadziriswazve inova nechokwadi chekuti zviri mukati zvinogara zvitsva sezuva rawakachengeta. Kudonhedza humbowo hwechivharo chemabhodhoro ekubikisa kunogadzira chipingamupinyi chisingavharwe nemhepo icho chinochengeta zvinwiwa zvakavharirwa uye zvinodzivirira kuchenesa nekuvira.
ZVIMWE ZVINOSHANDISWA: Bhodhoro regirazi rine chimiso rinogona kushandiswa kuchengeta zvese kubva mumajusi, vhiniga, zvinwiwa uye mvura kune maoiri, kefir, kombucha, doro, mukaka, manyuchi uye zvimwe zvakawanda. Nehukuru hwe1 litre, iwe uchave nezvakawanda zvekushandira pane inotevera pati.
KUCHENGETEKA & ECO-KUSHAMWANA: Mabhodhoro epamusoro epamusoro ane BPA yemahara uye haana chero chepfu, kemikari, phthalates uye lead, zvichivaita sarudzo yakachengeteka kupfuura mabhodhoro epurasitiki. Nokushandisa mabhodhoro egirazi anoshandiswazve, unogona kudzikisa kushandiswa kwepurasitiki mumba mako.
Heavy Duty Kuvaka:
Mabhodhoro egirazi anogadziriswazve anoitwa kuti agare. Izvo zvakagadzirwa kubva kune yakasimba girazi iyo inopa yakanyanya kusagadzikana kune kukanganisa uye tembiricha shanduko. Stainless simbi waya kuvhara uye polypropylene makapu anopa yakanakisa ngura kuramba uye haizoputi kana kubvarura senge chrome.
Yakachengeteka Iwe Nenyika:
Zvishandiso zvinoshandiswa kugadzira mabhodhoro edu zvine zana% zvisina chepfu, zvinogadziriswazve uye zvakachengeteka kune nharaunda. Ivo BPA yemahara, isina lead uye isina phthalates yemahara inovaita mhinduro yekuchengetedza yakachengeteka ichienzaniswa nepurasitiki. Nekushandisa iyi inogadziriswazve mabhodhoro egirazi, urikucheka kushandiswa kwepurasitiki mumba mako.
Yakachengeteka & Inodonhedza Hunyoro Cap:
Bhodhoro redu regirazi rine chimiso rinoita kuti uchengetedze maoiri, zvinwiwa uye nechero imwe mvura zvakachengetedzeka pasina kunetsekana nekurasika kunosemesa. Kuvharwa kweClamp kunochengetedza mweya zvisina mvura, kuchichiita chakanakira mhinduro yekuchengetedza waini, zvinonhuwira uye condiment
KUREZEKEDZWA, KUSVIRA CHEMAI: Bhodhoro rega regirazi rinouya nepurasitiki inobatsira uye silicone yekumisa iyo inosunga kwazvo bhodhoro rako. Mabhasiketi edu asingatenderi mhepo anoona kuti zvinwiwa zvako hazvigadzike uye zvinogara zviri zvitsva uye zvinonaka kwenguva refu. Caps zviri nyore kubvisa uye kupfeka.
YAKAKWANA MULTI-SHANDISA: Shandisa bhodhoro rako regirazi rine chimiso chekuchengeta mafuta, kefir, zvinwiwa, kombucha, Vhiniga, Doro, Mvura kana Soda. Slide muhombodo isina kudzivirira kuchengetedza uye kuchengetedza kutsva kwezvinwiwa zvako nezvinwiwa.
DURABLE, TOP QUALITY: Ichipinda, aya maBrewing mabhodhoro akagadzirwa kubva kune yakasimba, yakajeka girazi; yakakwana yekugara kwenguva refu, kudzokororwa kushandiswa. Yedu yakatetepa yemutsipa dhizaini inobvumira kudururwa nyore pasina kudira kusingadiwe Hapana chimwe chiri nani!
NAKIDZWA NENGOZI-YEMAHARA KUSHANDISWA: Yese yedu yekumusoro mabhodhoro epamusoro ndeye BPA, chepfu, kemikari uye isina lead. Iwe unogona ikozvino kuchengeta mafuta ako, zvinwiwa kana mvura pasina kunetseka pamusoro pehutachiona. Inowanikwa mune seti ye6, takave nechokwadi kuti iwe uchave uine mabhodhoro akakwana ekushandisa.
PREMIUM HEAVY-DUTY DESIGN: Iine yakasimba-yakasimba uye gobvu regirazi muviri, edu Flip Top Mabhodhoro akavakirwa kuti ape kurwisa kwakanyanya kushanduka kwetembiricha uye netsaona kukanganisa. Kuchenesa, ingoisa bhodhoro rako mudhishi rako rekuwachira.
Pashure: 1000ml yakajeka girazi chinwiwa bhodhoro
Zvadaro: Dehenya pachena chinwiwa bhodhoro
Beverage hombodo Wholesale
Carbonated Beverage Bhodhoro
Girazi Beverage Mabhodhoro
Glass Beverage hombodo Wholesale
Bhodhoro reMvura Rezvinwiwa zveCarbonated
150ml cylindrical yakajeka chirimwa chinwiwa
50ml epurasitiki chivharo chinwiwa bhodhoro
1000ml ~ 750ml epurasitiki chivharo chinwiwa bhodhoro
100ml Chinwiwa bhodhoro
500ml Cork chivharo chinwiwa bhodhoro
1000ml isina simbi yakavharwa bhodhoro rechinwiwa